Koreen Olaanaa Kabaja Guyyaa Saboota Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa sadarkaa Naannoo keenyaatti hundaa’e Karoora kabaja ayyaanichaaf qophaa’e irratti mari’atee kallattii kaa’ee jira.
CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):
Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan xixiqqaan hojjetaman of keessatti haammatee miseensota koree kanaaf dhiyaatee mariin irratti gaggeeffamee jira.
Marii gaggeeffame keessatti, Oromiyaan ayyaana kana wayita qopheessu hojiiwwan ayyaana dura hojjetaman, wayita ayyaanaa hojjetamaniifi ayyaana booda hojjetaman addaan baasuun irratti karoorfachuun maqaa Naannoo keenyaa caalaatti beeksisuu danda’uuniifi ayyaanota darban irraa adda ta’een Oromiyaan qopheessuu akka qabdu qabxiilee ijoo marii kanaa ture.
Kanaaf, koreewwan xixiqqaa kudhan (10) ta’an koree olaanaa kana jalatti hundaa’anii kan jiran yommuu ta'u, Koreewwan kunniin hojiiwwan isaanii qixa barbaadamuun karoorfatanii waltajjii marsaa itti aanu irratti dhiyeeffachuun ergama itti kenname gahumsaan bahachuu qabu akka qabu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsaniiru. Kana malees, ‘TASK FORCE’n hojii kana qindeessuuf hundaa’e hojiitti galuun hojii guyyaa guyyaa koreewwaniifi kabaja ayyaana kanaa hordofuun milkaa’ina hojii kanaaf gaheesaa taphachuu akka qabus Addee Loomiin beeksisanii jiru.
Walumaa galatti, IRREECHA kabajnu milkiin akka xumuurruuf tumsa taasisaa, kabaja Irreechaa akka xumuurreen harcaatii tokko malee hojii kanatti galuu qabna jedhamee jira.
Toorbee kana 23592
Ji'a kana 34304
2008 irraa eggalee 3885916